Ty'n-y-groes, Wales, United Kingdom
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSally And Sam
Ibekwe ngokufanelekileyo ngaphakathi kweConwy Valley kumda wePaki yeSizwe ye-Snowdonia. Ukufikeleleka ngokulula kwiBetws-y-Coed entle, idolophu engaselwandle yaseLlandudno kunye nembali yamandulo, idolophu ebiyelweyo yaseConwy.
Indawo yokuhlala yesitudiyo ibonelela ngebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi eyongezelelweyo ephezulu ukuba iyafuneka. Indawo yekhitshi enefriji, ioveni yemicrowave kunye neringi enye yokungenisa isitovu. Igumbi lokuhlambela elahlukileyo kunye neWC. Indawo yokupaka eyaneleyo. Isitiya esinengca echibini kunye nembono entle phezu kweenduli kunye namaphandle ajikelezileyo
Iindwendwe zinokufikelela kwigadi ephezulu enemibono ethandekayo yentaba kunye namaphandle ajikelezileyo.
Kukwakho nedama elithandekayo lokuhlala ecaleni kwangokuhlwa, elilungele ukuphumla ngeglasi yewayini
4.91 · Izimvo eziyi-128
IBwthyn Twt ikwindawo ezolileyo ngokwenene kodwa ifikeleleka lula kwii-pubs, iivenkile zokutyela kunye neeresityu. Kukho iinduli emnyango kwaye i-Snowdon kukumgama omfutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Sally And Sam
We are both in our fifties, have 2 children and a gorgeous grandson. Sam is a civil engineer and I am a Midwife We are both from North Wales originally but our careers took around the UK and also to the Middle East where we spent several years. We finally came back to North Wales in 2012 We both enjoy the outdoors and love nothing more than being out and about in the Snowdonia hills We have enjoyed being Airbnb hosts since 2017. We are here to welcome our guests on arrival and are around for a chat/advice/recommendations if needed
We are both in our fifties, have 2 children and a gorgeous grandson. Sam is a civil engineer and I am a Midwife We are both from North Wales originally but our careers took around…
Ukuba asikho ekhaya, sinokufumaneka ngomnxeba
USally And Sam yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ty'n-y-groes